DEG-DEG: Aaron Ramsey Oo Dib Ugu Laabtay UK, Kana Degay Koox Aan Laga Filaynin - GOOL24.NET
DEG-DEG: Aaron Ramsey Oo Dib Ugu Laabtay UK, Kana Degay Koox Aan Laga Filaynin
Xiddiga reer Wales ee Aaron Ramsey ayaa ka degay kooxda kubadda cagta Rangers ee horyaalka Scotland oo uu heshiis amaah ah oo soconaya illaa dhamaadka xilli ciyaareedkan uu ugu wareegay.
Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa heshiis la gaadhay Rangers, waxaanay isla qaateen in uu Aaron Ramsey ku tago Ibrox Stadium heshiis amaah ah oo soconaya illaa dhamaadka xilli-ciyaareedkan aynu ku jirno.
31 jirkan oo inta badan ku jiray kaydka Juventus, isla markaana ay yarayd fursadda uu kaga soo muuqdo kooxda kooowaad ayaa la filayay inuu tago horyaalka Premier League, waxaana lala xidhiidhinayay Burnley, hase yeeshee waxa uu si lama filaanah uga degay horyaalka Scotland.
Kooxda difaacanaysa horyaalka ee Rangers ayaa Isniintii maanta dedaal badan ku bixisay sidii ay laacibkan, waxaana waxaana saacadaha soo socda si buuxda loo dhamaystiri doonaa saxeexa qandaraaska amaahda ah ee uu laacibkani kaga ciyaari doono Ibrox Stadium.
Heshiiska Aaron Ramsey ayaa waxa ku jira qodob u ogolaanaya Rangers inay si rasmi ah ula wareegi karto marka uu dhamaado xilli ciyaareedkan socda, laakiin wali ma aanay soo bixin tirada lacagta ay Rangers bixin doonto.
Mushaharka Aaron Ramsey oo aad u badan ayay dhamaantii bixin doontaa Rangers inta uu amaahda kula joogo.